नेपालमा कति छन् अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग? दैनिक उत्पादन कति हुन्छ? - Nepal Readers
Home » नेपालमा कति छन् अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग? दैनिक उत्पादन कति हुन्छ?
उपत्यकामा रहेका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदै दैनिक ८ हजार सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने उनले बताए। काठमाडौं बाहिर बिराटनगर, रुपन्देही, दाङ लगायतका शहरमा थुप्रै अक्सिजन उद्योग रहेकाले उनीहरुलाई समेत सक्रिय बनाएमा अक्सिजनको अभाव नहुने उनको भनाइ छ।नेपालमा उत्पादन हुने अक्सिजनमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशसत औद्योगिक प्रयोगमा खपत हुने गर्छ। महामारीका बेला अक्सिजन प्रयोग गरिने उद्योग बन्द हुने भएकाले मेडिकल प्रयोजनका लागि अक्सिजनको अभाव नहुने अध्यक्ष शारडा बताउँछन्।
महामारी बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय अक्सिजनको माग भने पहिलेको तुलनामा बढेको अध्यक्ष शारडा बताउँछन्। मागअनुसार आपूर्ति पनि भइरहेको उनले बताए।अहिलेको अवस्थामा अक्सिजनको भन्दा पनि अक्सिजन भर्न प्रयोग हुने सिलिण्डरको अभाव हुनसक्ने शारडा बताउँछन्। मानिसहरुले अक्सिजन किनेर घरमा भण्डारण गर्न थाल्दा सिलिण्डरको अभाव हुने उनको भनाइ छ।
‘हिजोआज अक्सिजनसँगै सिलिण्डर खोज्ने मानिसको संख्या पनि बढेको छ। एउटा भएपनि मलाई सिलिण्डर चाहियो भन्न थालेका छन्,’ अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष शारडाले भने, ‘मानिसहरुले सिलिण्डर लगेर घरमा भण्डारण गर्न लागेका छन्।’अध्यक्ष शारडा खाना पकाउने (एलपी) ग्यास जस्तै अक्सिजन पनि घरमा स्टक गरेर राख्न जरुरी नभएको बताउँछन्। अक्सिजन उद्योगले पनि यसरी दिने कार्य गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
आवश्यक परेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा सहज रुपमै उपलब्ध गराउन सक्ने गरी उद्योगहरुले अक्सिजनको आपूर्ति गरिरहेको शारडाले बताए। अध्यक्ष शारडाका अनुसार कोरोना संक्रमितको सपोर्टका लागि प्रयोग हुने अक्सिजनका सिलिण्डर धोएर तथा पूर्ण रुपमा सेनिटाइज गरेर पुन: प्रयोगमा ल्याइन्छ।
आफूले दैनिक २२ घन्टा उद्योग चलाएर अक्सिजन उत्पादन गरेको आपत्‌कालीन अवस्थामा २४ घन्टा उद्योग सञ्चालन गरेर पूर्ति गर्न सकिने चुडाल बताउँछन्।केही उद्योगहरुले अहिले आफ्नो प्लान्ट १८ घन्टा चलाएर उत्पादन गरिरहेको उनले बताए। १८ घण्टाको समयलाई बढाएर उत्पादन बढाउन सकिने उनी बताउँछन्।
यद्यपि पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको समस्याले केही अप्ठेरो परहेको उनले सुनाए। ‘बीचमा झ्याप झ्याप बत्ती जाने गरेकाले केही समस्या उत्पन्न भएको छ। विद्युत् आपूर्तिमा भएको समस्या भने समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ चुडालले भने। – स्वास्थ्य खबर
नेपालले क्रिकेटमा पायाे एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय मान्यता